တာဝေးပိုပြေးနိုင်သည့် BrahMos ခရုဇ်ဒုံးပျံများကို ယခုနှစ်အတွင်း စမ်းသပ်မည် - People Media Myanmar
Home တာဝေးပိုပြေးနိုင်သည့် BrahMos ခရုဇ်ဒုံးပျံများကို ယခုနှစ်အတွင်း စမ်းသပ်မည်
တာဝေးပိုပြေးနိုင်သည့် BrahMos ခရုဇ်ဒုံးပျံများကို ယခုနှစ်အတွင်း စမ်းသပ်မည်
မော်စကို၊ သြဂုတ် ၂၆
ရုရှား-အိန္ဒိယပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ပြီး တာဝေးပိုပေးနိုင်ရန်အဆင့်မြှင့်ထားသည့် BrahMos ခရုဇ်ဒုံးပျံများကို ယခုနှစ်အတွင်း စမ်းသ ပ်မှုများပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း Tactical Missiles ကော်ပိုရေးရှင်းမှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဘိုးရစ် အော့နိုဆော့ဗ်က တနင်္လာနေ့တွင်ပြောသည်။
“အကွာအဝေးပိုရောက်အောင်အဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ BrahMos တွေကိုစမ်းသပ်မှုတွေ ဒီနှစ်မှာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်” ဟု Army-2020 နိုင်ငံတကာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဖိုရမ်တွင် အော့နိုဆော့ဗ်က ပြောသည်။
ယခုနွေရာသီတွင် BrahMos လေကြောင်းအခြေစိုက်အဆင့်မြှင့်ဒုံးပျံကို အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အောင်အောင်မြင် မြင်အသိ အမှတ်ပြုခဲ့ကြောင်းလည်းပြောသည်။
ထိုဒုံးပျံကြောင့် အိန္ဒိယလေတပ်စွမ်းရည် သိသိသာသာမြင့်တက်နိုင်မည်ဟုလည်းပြောသည်။
“BrahMos ရဲ့ပစ်လွှတ်အကွာအဝေး ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ရှိပြီး Su-30MKI တွေကလည်း လေကြောင်းမှာဆီဖြည့်ရင်း နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ လောက်အထိသွားနိုင်တဲ့အတွက် နှစ်ခုပေါင်းရင် အိန္ဒိယသမုဒ္ဓရာဇုန်ထဲမှာ အကြီးအကျယ်အားသာချက်ဖြစ်လာမှာပါ။”ဟု အော့နိုဆော့ဗ်က ပြောသည်။
ရုရှား-အိန္ဒိယပူးပေါင်းလုပ်ငန်း BrahMos ကိုလည်း သူက ချီးကျူးခဲ့ပြီး ယခုလျင်လျင်မြန်မြန်တိုးတက်လာသ ည့်ပူးပေါင်းလုပ်ငန်းသည် စစ်ဘက်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကောင်းဆုံးများထဲမှာ နမူနာ ၁ ခုဖြစ်သည်ဟုလည်း သူကေ ပြာသည်။
Ref : Tests of increased-range BrahMos cruise missiles set for 2020
တာဝေးပိုပွေးနိုငျသညျ့ BrahMos ခရုဇျဒုံးပြံမြားကို ယခုနှဈအတှငျး စမျးသပျမညျ
ရုရှား-အိန်ဒိယပူးပေါငျးထုတျလုပျပွီး တာဝေးပိုပေးနိုငျရနျအဆငျ့မွှငျ့ထားသညျ့ BrahMos ခရုဇျဒုံးပြံမြားကို ယခုနှဈအတှငျး စမျးသ ပျမှုမြားပွုလုပျရနျ ရညျရှယျထားကွောငျး Tactical Missiles ကျောပိုရေးရှငျးမှ အမှုဆောငျအရာရှိခြုပျ ဘိုးရဈ အော့နိုဆော့ဗျက တနင်ျလာနတှေ့ငျပွောသညျ။
“အကှာအဝေးပိုရောကျအောငျအဆငျ့မွှငျ့ထားတဲ့ BrahMos တှကေိုစမျးသပျမှုတှေ ဒီနှဈမှာပွုလုပျဖို့စီစဉျထားပါတယျ” ဟု Army-2020 နိုငျငံတကာစဈဘကျဆိုငျရာဖိုရမျတှငျ အော့နိုဆော့ဗျက ပွောသညျ။
ယခုနှရောသီတှငျ BrahMos လကွေောငျးအခွစေိုကျအဆငျ့မွှငျ့ဒုံးပြံကို အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျ အောငျအောငျမွငျ မွငျအသိ အမှတျပွုခဲ့ကွောငျးလညျးပွောသညျ။
ထိုဒုံးပြံကွောငျ့ အိန်ဒိယလတေပျစှမျးရညျ သိသိသာသာမွငျ့တကျနိုငျမညျဟုလညျးပွောသညျ။
“BrahMos ရဲ့ပဈလှတျအကှာအဝေး ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ရှိပွီး Su-30MKI တှကေလညျး လကွေောငျးမှာဆီဖွညျ့ရငျး နဲ့သှားမယျဆိုရငျ ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ လောကျအထိသှားနိုငျတဲ့အတှကျ နှဈခုပေါငျးရငျ အိန်ဒိယသမုဒ်ဓရာဇုနျထဲမှာ အကွီးအကယျြအားသာခကျြဖွဈလာမှာပါ။”ဟု အော့နိုဆော့ဗျက ပွောသညျ။
ရုရှား-အိန်ဒိယပူးပေါငျးလုပျငနျး BrahMos ကိုလညျး သူက ခြီးကြူးခဲ့ပွီး ယခုလငျြလငျြမွနျမွနျတိုးတကျလာသ ညျ့ပူးပေါငျးလုပျငနျးသညျ စဈဘကျနညျးပညာပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုအကောငျးဆုံးမြားထဲမှာ နမူနာ ၁ ခုဖွဈသညျဟုလညျး သူက ပွောသညျ။
Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïðîòèâîêîðàáåëüíàÿ ñâåðõçâóêîâàÿ ðàêåòà “Áðàìîñ” (BRAHMOS) íà IX Ìåæäóíàðîäíîì âîåííî-ìîðñêîì ñàëîíå ÌÂÌÑ-2019. Ëàäèñëàâ Êàðïîâ/ÒÀÑÑ
« တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် COVID-19 အမြန်ဆုံးကူးစက်မှုအရှိန်နှေးကွေးနေသော်လည်း အရှေ့တောင်အာ ရှနှင့် ‌မြေထဲပင်လယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မပါဝင်
ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ဆေးဝါးအထောက်အကူပြုစက်၊ ဆေးပစ္စည်း ၁၃၄ မျိုးနှင့် Oxygen Plant စက်ပစ္စည်းတစ်စုံ တပ်မတော်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့နှင့်အတူ တပ်မတော်မှသွားရောက်လှူဒါန်း »